Manchester United oo 120 milyan oo Euro ku soo qaadanaysa bedelka goolhayaheeda David de Gea – Gool FM
(Manchester) 29 Abriil 2019. Waxaa soo baxaya warar xooggan oo ku saabsan in kooxda kubadda cagta Manchester United ee waddanka Ingiriiska ay 120 milyan oo Euro ku soo qaadato goolhayaha kooxda Atletico Madrid ee waddanka Spain, Jan Oblak waase hadddii Goolhayaha haatan ee United David de Gea uu kooxda ka tago.
Mustaqbalka De Gea ee Old Trafford ayaa waxa uu galay mugdi kaddib markii goolhayahani Spanish-ka ah uu dhowr jeer sameeyay qaladaad ciyaareed oo aan loo dulqaadan karin.
Ciyaartii xalay dhex martay Manchester United iyo Chelsea ee ka dhacday Old Trafford taasoo ku dhammaatay barbaro 1-1 ayaa waxaa De Gea uu qalad ku lahaa goolkii Chelsea ee uu dhaliyay Marcos Alonso, halka sidoo kalena aad loogu cambaareeyay qalad uu sameeyay ciyaarihii Man United ay la kala yeelatay Man City iyo Barcelona horraantii bishan.
Rajadii Man United ay ka lahayd afarta sare ee Premier League ayaa gacanteeda ka baxday, waxaana ESPN ay sheegeysaa in rajada Man United ay kula soo wareegi karto goolhaye Oblak ay ku xiran tahay usoo bixitaankooda afarta kooxood ee uga sarreysa EPL ee xilli ciyaareedka soo socda ka qayb geli doona tartanka Champions League.
Qandaraaska goolhaye Jan Oblak ee Atletico Madrid ayaa lagu jebin karaa 120 milyan oo Euro, Man United ayaana la soo sheegayaa inay diyaar la tahay lacagtaas haddii uu ka tago goolhayaha reer Spain ee De Gea.